Shacabka Soomaliyeed oo rajeynaya in dalka uu geli doona xaalad ka duwan xaaladihii uu ku jiri jiray – Codka Soomaalida Online Edition: Codka Soomaalida Online | Monday 20 May, 2013
Published On: Fri, Sep 7th, 2012 WARARKA MAANTA | By Shacabka Soomaliyeed oo rajeynaya in dalka uu geli doona xaalad ka duwan xaaladihii uu ku jiri jiray
Tags Number of View: 25
Jimco, September 07, 2012— Shacabka Soomaaliyeed ayaa waxay rajeynayaan inuu dalku geli doono jawi ka wanaagsan midda uu hadda ku jiro, kaddib doorashada madaxnimo ee Soomaaliya oo dhacaysa toddobaadka soo socda.
“Isbedelka xukuumadeed ee dhici doona waa mid aan aad u taageersanahay, waayo waxaan qabaa in mustaqbalka dalka uu isbedel ku imaanayo uuna u gudbayo xaalad tan ka duwan,” ayuu yiri Ayaanle Carab Xasan oo la hadlayay wakaaladda wararka Shiinaha ee Shinwaa.
“Waxay ila tahay in doorashada ay tahay howl dalkeenna u horseedaysa mustaqbal wanaagsan. Waxaan rajeynayaa in madaxweynaha cusub uu noqdo mid danta dalka ka fekera dibna u soo celiya qoxootiga Soomaaliyeed ee dibadaha ku nool, kana shaqeeya horumarka dalka. Waayo shirarka lagu qabtay gudaha dalka way ka wanaagsan yihiin kuwii dibadda lagu qaban jiray. Sidoo kale waxaan rajeynayaa in doorashadu ay dalka u hoggaamiso syaasad wanaagsan,” ayuu yiri ganacsde Xasan Cabdi.
Bile Isaaq Faarax, ayaa wuxuu isaguna qabaa in tani ay tahay rajadii ugu wanaagsanayd Soomaliya labaatankii sano ee lasoo dhaafay. Isagoo yiri: “Anigu waxaan rumeysanahay in doorashadan ay tahay mid rajo gelinaysa Soomaaliya 21 sano oo rabashado ah kaddib, waayo waxaan muddadaas ka jiray dalka siyaasado kala duwan. Waa inaan Alle uga mahad-celinno iftiinka noo bidhaamay.”
“Waxaan u arkaa doorashada guul shacabka Soomaaliyeed u soo hoyatay, maxaa yeelay tani waa mid ka tarjumaysa isbedel uu dalku galayo. Ma jiro wax khilaaf ah sidii lagu arki jiray shirarkii dibadaha dalka lagu qaban jiray. Shacabka Soomaaliyeed waxay muhiimad weyn u arkaan shirarka lagu qabtay Muqdisho,” ayuu yiri Cabdullaahi Cabdi Xuseen oo ka mid ah shacabka Muqdisho ku nool.